लालबाबु: मन्त्रिपरिषद् छिर्दा हिरो, डेढ... :: प्रशन्न पोखरेल :: Setopati
प्रशन्न पोखरेल काठमाडौं, मंसिर ५
२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधि सभा चुनावमा वाम गठबन्धनको झन्डै दुई तिहाइ बहुमत आयो। तत्कालीन एमालेका अध्यक्षका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भयो। तर ओलीले क-कसलाई मन्त्री बनाउलान् भन्ने आमचासो थियो किनकी तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा मन्त्रीका दाबेदार एकसे एक नेता थिए।
चुनाव भएको तीन महिनापछि २०७४ फागुन ३ मा ओली प्रधानमन्त्रीको सपथ खान राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास पुगे। ओलीको सपथ हुनु केहीअघिसम्म पनि उनका मन्त्री को हुन् टुंगो भइसकेको थिएन।
ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए। लगत्तै शितलनिवासमा दुई मन्त्रीको पनि सपथ भयो। ओलीले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएकै दिन मन्त्री बन्ने दुई जना थिए, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा। अर्थात् ओली मन्त्रिपरिषदमा पण्डितको इन्ट्री ‘हिरो’ को जसरी भएको थियो।
लालबाबुका लागि भने मन्त्री पद सरप्राइज थियो। किनकी उनलाई ओलीले मन्त्री बनाउँछु भनेका थिएनन्। बरू राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले तपाईं मन्त्री हुनुभएको छ, शितल निवास आउनु भनेर खबर गरेका थिए।
वातावरण मन्त्रीको जिम्मा पाएका पण्डितले वातावरण प्रदुषण गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने बताए। वातावरण प्रभाव मूल्यांकन इआइए नगरी सेवा सञ्चालन गर्ने पाँचतारे होटल सोल्टी, द्वारिकाजलगायतलाई जरिवाना तिराउने घोषणा गरे।
यतिमात्र होइन, धुलोले आक्रान्त काठमाडौंमा एक वर्षपछि मास्क लगाउनु पर्दैन भनेपछि उनको चर्चा चुलियो। लालबाबुको दोस्रो कार्यकालको पहिलो महिनाको यस्तै चर्चा र हाइहाइमा बित्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरे। लालबाबुको जिम्मेवारी फेरि उनी दुई वर्षजस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा आए।
कार्यभार सम्हालेपछि उनले कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त गरिदिने चेतावनी दिए।
शेरबहादुर देउवा सरकारले (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) जान नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश योजना ल्याएको थियो। २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ५० वर्ष नाघेका कर्मचारी यो योजनामा सहभागी हुन पाउँथे। उनीहरूलाई अग्रिम पैसा दिने सरकारको तयारी थियो।
पण्डितले स्वेच्छिक अवकाश योजना रोकिदिए। ९ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले निवेदन दिएको स्वेच्छिक अवकास योजना रोकेर कर्मचारीलाई काममा लगाएपछि कर्मचारी मन्त्रीप्रति रूष्ट बने। कर्मचारी र लालबाबुको टकराब बढ्यो।
कर्मचारी युनियनले पण्डितलाई हटाइदिने चेतावनी दिए। पण्डितले मानसिक अवस्था बिग्रेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने जवाफ फर्काए।
खटाएको ठाउँमा नजानेको जागिर चट गरिदिने अभिव्यक्तिले मन्त्री पण्डितलाई थप विवादमा तान्यो।
स्वेच्छिक अवकास योजना स्थगित भएसँगै ढिला भएको कर्मचारी समायोजनले उनको आलोचना बढ्यो।
सरकारी काममा मात्र होइन उनको पहिलाको छविमा पनि प्रश्न उठ्यो। सम्पत्ति विवरणमा सम्पत्तिको नाममा पूरानो साइकल लेखे पनि मन्त्री भएपछि पत्नी विमला महतलाई मन्त्रालयकै बा १ झ ९८४७ नम्बरको गाडी चढ्न दिएका भन्दै उनको आलोचना भयो।
पछिल्लो समय लालबाबुको पर्फमेन्समा प्रश्नचिन्ह लागिसकेको थियो। ओली सरकारका मन्त्रीहरूमा उनी ठीकै काम गर्नेको सूचीमा थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको स्प्रिटअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। त्यसमा मन्त्री पण्डित पनि परे। उनीसँगै सपथ लिएकी थममाया थापा पनि सिंहदरबारबाट बिदा भइन्।
प्रधानमन्त्रीले पद खोसेपछि सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै पण्डितले कर्मचारी समायोजन छिटो गरे पनि केहीको चित्त बुझाउन भने नसकिएको बताए।
मन्त्रीबाट हटे पनि आफू प्रधानमन्त्रीप्रति खुसी भएको उनले बताए।
‘कसलाई मन्त्री बनाउने यो प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो। न्याय अन्यायको विषयवस्तुको कुरा नै होइन,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘मन्त्री पाँच वर्षका लागि भन्ने थिएन। प्रधानमन्त्रीले जसलाई राम्रो देख्नुहुन्छ उसैलाई बनाउनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई जे लाग्छ त्यही गर्नुभयो, मलाई भन्नु अरू केही छैन।’
केही काम गर्न सकिनँ जस्तो लागेको थियो? भन्ने सेतोपाटीको प्रश्नमा पण्डितले भने, ‘कर्मचारी समायोजन अन्य देशको तुलनामा नेपालमा तीव्र गतिमा भएको हो। त्यो जनताले सिधै देखिराखेको छ।’
उनले एक प्रक्रियाबाट अर्कोमा जाँदा स्वभाविक रूपमा केहीको चित्त दुखेको हुनसक्ने बताए।
‘मौसम परिवर्तन हुँदा रूखाघोकी लाग्दैन? सबैलाई काठमाडौंमा राखेर तलब खुवाउने हो भने के देश बन्छ? देश बनाउने कुरा प्रमुख हो।’
कर्मचारी समायोजन ऐन निर्माण हुँदै गरेको अवस्थामा सरकारले पण्डितको ठाउँमा नयाँ मन्त्री हृदेश त्रिपाठी ल्याएको छ। २०७४ मा त्रिपाठीले वामगठबन्धनबाट चुनाव जितेका थिए। उनले कार्यभार बिहीबार सम्हालेका छन्।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, मंसिर ५, २०७६, ०३:३९:००